Moments Neshamwari 11
Copyright, 1907, neHW PERCIVAL.
MuKristu anoti Munhu ane Muviri, Mweya neMweya. ITheosophist inotaura kuti Munhu ane Mazano manomwe. Mune mazwi mashomanana ndeiyi Aya Mazano manomwe?
Iyo theosophist inotarisa murume kubva pamatanho maviri. Kubva pane mumwe iye anofa, kubva kune mumwe iye haafi. Chikamu chinofa chemunhu chakagadzirwa nenheyo ina dzakasiyana. Kutanga, muviri wenyama, uyo wakavakwa kubva pamagetsi, zvinwiwa, mweya nemoto, zviri zvese zvirimo zvemuviri wenyama. Chepiri, linga sharira, iri fomu, kana dhizaini yemuviri. Iyi fomu muviri ndeye ether, chinhu chisinga shanduke pane chinogara chichichinja muviri. Iyo dhizaini kana fomu yemuviri ndiyo musimboti uyo unogadzira zvisingaverengeke zvikafu zvemidziyo, zvinwiwa, magasi uye nechiedza chakatorwa mumuviri, uye chinochengetedza chimiro chazvo muhupenyu hwese. Yetatu, prana, kana musimboti wehupenyu. Iyi nheyo yehupenyu inoita kuti fomu remuviri riwedzere uye rikure, zvisizvo fomu racho raizogara rakafanana. Nesimba rehupenyu chikafu chemuviri wenyama chinochengetwa mukutenderera nguva dzese. Hupenyu hwehupenyu hunoputsa uye hunhu kubva zera uye kutsiva icho muchimiro nenyaya nyowani. Saka chekare chitakuri chinotakurwa uye chinotsiviwa nechinhu chitsva chemuviri, uye hupenyu hwehupenyu hwakavakirwa mumuviri wemuviri, uye iwo wemuviri wenyama unopihwa chimiro uye wakabatanidzwa pamwechete nekugadzira kana chimiro chemuviri. Chechina, akafanana, musimboti wechido. Chido nyama inokatyamadza inochiva mumunhu. Ndiwo hunhu hwekuzvarwa uye maitiro emhuka mumunhu, uye inoshandisa uye ichipa kutungamira kuupenyu uye chimiro chemuviri wenyama. Iyi nheyo ina dzinoumba chikamu chemunhu chinofa, chakaparadzaniswa, chakaparadzaniswa uye chinodzokera kuzvinhu zvakasvikirwa kubva kwairi.
Chikamu chisingafi chemunhu chakapetwa katatu: Kutanga, manas, pfungwa. Pfungwa ndiyo yakasarudzika nheyo iyo inoita murume munhu. Pfungwa ndiyo nheyo yekufunga iri mumunhu, iyo inoongorora, inopatsanura, inozvifananidza uye inozviona seyakaparadzana nevamwe. Iyo inosanganisa nechishuwo uye mukati mehupenyu hwepanyama ino funga chishuvo chekuve wega. Pfungwa zvikonzero, asi kuda kunoda; hunhu hunoshuva, kupokana nechikonzeroi chinodudza. Kubva pakusangana kwepfungwa nechishuvo kunouya zvese zvatakasangana nazvo muhupenyu. Nekuda kwekubatana kwepfungwa uye chishuvo isu tine hukama hwevanhu. Kune rimwe divi, kunhuva, kutsamwa, uye bongozozo; pane imwe, inonzwisisika, ine rugare ine rudo ine munhu anobva kwaari. Pfungwa ndiyo nheyo iyo huso hwechisiko hunoshandurwa; makomo akadururwa, nzizi dzakavakwa, matenga-mudenga anovakirwa masimba masimba ezvisikwa anosunganidzwa uye anofambiswa kuti agadzirise budiriro. Yechitanhatu, budhi, ndiyo mweya weuMwari, iwo musimboti uyo unoziva uye unonzwa wega kuva mune vamwe uye vamwe maawo. Ndiyo musimboti weukama hwechokwadi. Inozvibayira iyo kuti zvisikwa zvese zvinosimudzwa zvakakwirira. Ndiwo mota inoshanda kuburikidza nayo mweya wakachena. Yechinomwe, atma, iwo iwo mweya iwoawo, wakachena uye usina kusvibiswa. Zvinhu zvese zvinobatana mazviri, uye ndizvo zvinotarisisa mukati uye nezvese zvinhu. Pfungwa, mweya pamwe nemweya, ndizvo zviga zvisingafi, nepo chiri chemuviri, chimiro, hupenyu uye chishuvo chiri chinofa.
Kupatsanurwa kwechiKristu kwemunhu mumuviri, mweya nemweya hakuna kunyatsojeka. Kana nemuviri zvichireva chimiro chemuviri, saka sei nhoroondo yehupenyu hwakaparadzaniswa, chimiro chisingagumi uye mhuka iri mumunhu? Kana nemweya zvichinzi chinhu chinogona kurasika kana kuponeswa, izvi zvinoda tsananguro yakasiyana nekirisito. Mukristu anoshandisa mweya nemweya uye zvakafanana uye anoratidzika kunge asingakwanise kutsanangura mweya nemweya kana kusakwanisa kuratidza mutsauko uripo pakati peumwe neumwe. Iyo theosophist nekugadzika kwake kanomwe inopa zvemunhu tsananguro yemurume, izvo hazvo zvine musoro.
Mune mazwi mashomanana iwe unogona kundiudza chii chinoitika parufu?
Rufu zvinoreva kuparadzaniswa kwemuviri wemuviri nekugadzirwa kwayo, kana fomu yemuviri. Sezvo rufu rwunosondela fomu yemuviri we ether unozvibvisa wega kubva kutsoka kumusoro. Ipapo pfungwa kana ego dzinosiya muviri kuburikidza uye nemweya wekufema. Iwo mweya wekubva unomisa hupenyu, unosiya muviri fomu, uye fomu remuviri rinokwira kubva pachipfuva uye kazhinji rinobva rabuda kunze kwemukati kubva mumuromo. Tambo yakanga yabatanidza iyo yenyama neyemuviri muviri wayo yakabayiwa, uye kufa kwakaitika. Izvo hazvigoneke kumutsidzira muviri wenyama. Nongedzo yekuda inogona kubata iyo pfungwa yepamoyo muhusungwa kwenguva, kana iyo pfungwa panguva yehupenyu yakafunga nezvezvayo zvido seyakowo, mune izvo mamiriro ayo inoramba iine mhuka zvishuwo kusvikira nguva yakadaro yainogona kusiyanisa pakati payo pachavo, ipapo inopfuura ichipinda mumamiriro ekunze ekuzorora kana chiitiko chinoenderana nemafungiro ake epamusoro, anovaraidzwa nazvo uchiri kugara mumuviri wenyama. Ikoko kunosara kusvikira nguva yekuzorora kwayo yasvika kumagumo, ipapo inodzokera kuhupenyu hwepasi kuti ienderere mberi nebasa rayo kubva kunzvimbo yaakasiirwa.
Vazhinji vezvokunamata vanotaura kuti pamisangano yavo mweya yevakasimuka inoonekwa uye inotaurirana neshamwari. Theosophists vanoti izvi handizvo; kuti izvo zvinoonekwa hazvisi mweya asi shell, spook kana chido chemuviri icho mweya wakarasa. Ndiani akarurama?
Isu tinotora chirevo cheiyo theosophist kunge chakanyanyisa kurongeka, nekuti chinongedzo neicho chinogona kutaurirana pachivanzika chinongova icho chechinhu chakafungidzirwa nehupenyu panguva uye kutaura kwakadaro kunoshanda kune zvinhu zvepanyika, nepo chikamu chehunyanzvi munhu aitaura nezve zvinhu zvemweya.
Kana mweya wevanhu ungasungwa musungwa mushure mekufa nemuviri wayo unoda, nei mweya uyu usingaoneki pamisangano uye nei zvakashata kutaura kuti hazvioneki uye zvinotaurirana nevatambi?
Izvo hazvigoneke kuti mweya wemunhu uonekwe panzvimbo uye nekutaura neshamwari, asi hazvibviri kuti zviite, nekuti ivo "vagari" havazivi nzira yekudzora musungwa wenguva pfupi uye nekuti chitarisiko chakadai chaizodaidzwa neumwe anoziva sei, kana zvishuwo nekushuvira kukuru kweuyo arikurarama pamwe ne mweya we mweya. Zvakaipa kutaura kuti zvinoonekwa ndiyo mweya yevakabva nekuti mweya wemunhu usingakwanise kusiyanisa pakati pawo uye zvido zvawo unowanzo pfuura nepametorphosis yakafanana neyebhabhurosi kuitira kuti igone kuziva mamiriro ayo. Ichiri mumamiriro ezvinhu aya hachishande sezvakaita cocoon. Kuti mweya wemunhu unokwanisa kuzvimanikidza kuzvitsaura kubva kumhuka ungaramba kuva nechekuita nemhuka iyoyo inoita kuti itambure zvakadaro.
Chikonzero chechiitiko chisina kujairika chakadai sekuonekwa kwemweya wemunhu akasarudzika pachisikwa chingave kutaurirana neumwe aripo pane dzimwe nyaya, seizvozvo, senge ruzivo rwekukosha pamweya kana kukosha kwehunyanzvi kune uyo anotonyanya kubatikana. Kukurukurirana kwemasangano anoita masquerade pasi pezita remumwe munhu akaenda, kutaura uye kutaura pamusoro pezvinhu zvisina basa nekufungidzira pane imwe nguva chinhu chakayerwa nemumwe wevanogara. Dai shamwari dzedu dzekuenda dzakange dzine mhosva yekutaurirana kwakadai pakati pedu mukati mehupenyu hwavo hwese, isu, seshamwari, taizvichemera, asi zvakadaro isu taifanira kunge takamanikidzwa kuti tivaradze munzvimbo yekupenga, zvave kutoonekwa panguva imwechete kuti ivo vaive vapererwa nepfungwa. Izvi ndizvo chaizvo zvaitika kune zvisikwa zvinoratidzika mumashure. Ivo vakatorasika pfungwa. Asi chishuwo chatiri kutaura chinosara, uye chishuwo nechiratidzo chete chepfungwa chaive chakabatana nacho chinoratidzika pakuonekwa. Izvi zvinoratidzika zvinokwakuka kubva pane imwe musoro kuenda kune imwe zvisina kuratidza kwechikonzero kana chero kuchenjera kwekufunga kana kutaura. Kufanana nokupenga, ivo vanoratidzika kunge vanongoda kufarira chimwe chinhu, asi ivo vanongoerekana varasikirwa nenyaya, kana kubatana kwavo nacho, uye vanosvetukira kune imwe. Kana munhu akashanyira imba yekupenga, anozosangana nedzimwe nyaya dzakasiyana siyana. Vashoma vanozokurukura pamwe nekureruka pane dzakawanda nyaya dzekufarira, asi kana zvimwe nyaya zvikaunzwa zvemwedzi zvinopesana. Kana kukurukurirana kwacho kukaenderera mberi kwenguva yakaringana iyo pfungwa yavakasiya kuve yemunhu ichaonekwa. Zvakangoriwo nemashops kana mafomu ekuchiva anoratidzika pamasisitres. Ivo vanoratidzira tsika dzekare uye kushuvira uye kwehupenyu hwepasi uye vanozvitaura pachavo maererano neizvo zvido, asi zvinogara zvichidonha mukutaura kusinganzwisisike kana dzimwe nyaya dzikaunzwa dzisina kukodzera kune imwe shungu. Ivo vane hunyanzvi hwemhuka uye, semhuka, vachatamba nezvemunda voyambuka uye vachidzokorodza mateki avo kuti vadzore uyo anovateverera nemibvunzo inoteedzana. Kana kuvhima kunoenderera, iye anenge asara obvunza mubvunzi nekuti "nguva yake yasvika uye anofanirwa kuenda" kana zvimwe achataura kuti haazive kuti apindura sei pane zvaakabvunzwa. Kana mweya wemunhu wakashambwa ukaonekwa anogona kunge akananga uye achiremerwa mune zvaakataura uye nezvaakataura zvichave zvakakosha kumunhu anenge ataurwa. Mhando yekutaurirana kwake yaingave yehunhu, yehunhu kana yemweya kukosha, zvaisave zvezvinhu zvakajairwa, sezvazvinowanzoitika pamasekondi.
Kana kuonekwa pamisangano ndeye chete mabhomba, mahwendefa kana miviri yenyama, iyo yakasvibiswa nemweya yevanhu mushure mokufa, nei iri kukwanisa kukurukura nevatambi pane imwe nyaya inozivikanwa chete kune munhu ane hanya, uye nei Ndizvo here kuti nyaya imwechete icharehwa kakawanda?
Kana izvo zvipuka kana mafomu efariro akabatana mukati mehupenyu hwepasi nemazita avanoti aari, ivo vanoziva mimwe misoro, senge ndeyemunhu anopenga, asi vanongova ma automatons, vanodzokorora zvakapfuura zvakare zvakasununguka. pfungwa nezvishuwo zvehupenyu. Segiramufoni vanotaura izvo zvakange zvataurwa mavari, asi kusiyana negiramufomu ivo vane zvido zvemhuka. Sezvo zvishuwo zvavo zvakabatana nepasi, saka zvavari ikozvino, asi pasina kuzvidzora nekuda kwekuvapo kwepfungwa. Mhinduro dzavo dzinokurudzirwa uye kazhinji ndidzo dzinoratidzwa nemibvunzo yakaiswa kwavari, uye ndedzipi dzinoratidzwa navo mupfungwa dzemubvunzo kunyangwe angave asiri kuzviziva. Semuenzaniso, munhu angaona mwenje unoratidzwa pane ngowani yemupfekedzi kana chimwe chinhu chaangave asingazive. Kana mubvunzi achiudzwa nezvechimwe chinhu chaasati aziva nezvake, anozviona sechinhu chakanaka uyezve anofunga kuti chingangove chaizivikanwa iye chete nemuridzi wake, nepo chiri chete kuratidzwa kunoonekwa mundangariro dzemubvunzi kana zvimwewo kufungidzira kwechinoitika chinokonzerwa nechishuvo-fomu uye chakapihwa kutaura chero chiitiko chichiitendera.
Ichokwadi hachikwanisi kurambwa kuti mweya dzimwe nguva inotaura chokwadi uyewo inopa mazano iyo kana kutevedzwa ichaguma nekubatsirwa kwevose vanofunga. Ko theosophist, kana kuti chero ipi zvayo inopesana nekunamata, inoramba kana kutsanangurira kunze kwezvinhu izvi?
Hakuna theosophist kana mumwe munhu anoremekedza chokwadi anomboedza kuramba chokwadi, kana kubvisa chokwadi, kana kuzama kuvanza chokwadi, kana kuzvitsanangura achienda. Kuedza kwemunhu chero upi zvake anoda chokwadi kuwana pane chokwadi, kwete kuvanda; asi kuda kwake chokwadi hakudi kuti agamuchire sechokwadi zvirevo zvemunhu asingafungi, kana izvo zveanogogogodza, kana chigobvu, kana chimhete, achizvinyudza pakuona seshamwari inodiwa yaenda. Iye anoteerera kune izvo zvinonzi zvikaitwa, obva aratidzira izvo zvinotaurwa kuti ndezvechokwadi kana kuti kunyepa nehuchapupu hwakatungamirwa. Izvo chokwadi zvinogara zvichizviratidza. Kubva mumiromo yavo, vasande vanozviratidza sevatsvene, vazivi kuti vave huzivi; kutaura kwevanhu vasingafungi kunovaratidza kuva vasingafungi uye spooks inoratidza ivo kuva spooks. Isu hatitende kuti vafemberi vanopesana nechokwadi cheMweya, asi vanoramba zvinotaurwa nevazhinji vezvemweya.
Chikamu chekutanga chemubvunzo ndechekuti: "midzimu" dzimwe nguva inotaura chokwadi. Ivo vanodaro — dzimwe nguva; asi ndozvakaitawo tsotsi rakaomesesa moyo nekuda kwenyaya iyo. Sezvo pasina imwe nguva yechokwadi chakataurwa na "mweya" wakapihwa, isu tichagona kutaura kuti zvokwadi kana zvokwadi zvinotaurwa neizvo vamwe vanhu vanozomeedzera pakudaidza kuti "midzimu" ndeyezvinhu zvakajairika. Izvo, semuenzaniso, sekutaura kuti mukati mevhiki iwe uchagamuchira tsamba kubva kuna Mary, kana John, kana kuti Maria acharwara, kana kupora, kana kuti imwe rombo rakanaka richawira, kana kuti shamwari ichafa, kana kuti tsaona ichaitika. Kana chimwe chezvinhu izvi chingave chokwadi chingangoenda kunoratidza kuti chimwe chikamu - chingave chemhando yepamusoro kana chakaderera-chinokwanisa kuona zvakanakisa kupfuura zvaakaita, kana asina kudzidza. Izvi zvakadaro nekuti muviri woga woga unoona pane iyo ndege iri kushanda pairi. Paunenge uchigara mumuviri wenyama, munhu anoona zvinhu zvepanyama kuburikidza nemafungiro enyama; uye zviitiko zvinoonekwa chete panguva yekuitika kwavo, sekutora chando, kana kudonha, kana kugamuchira tsamba, kana kusangana netsaona. Asi kana imwe isingaganhurwe kumuviri wemuviri uye ichiri nemafungiro, idzi pfungwa dzinoshanda mundege inotevera iyo yepanyama, inova iyo astral. Mumwe anoshanda pane imwe ndege yeAralral anogona kuona zviitiko zvichiitika ipapo; maonero ari mune imwe ndege yeAralral anobva kune yakakwirira ivhu pane yepanyama. Saka, semuenzaniso, pfungwa kana chinangwa cheumwe chekunyora tsamba chinogona kuonwa nemunhu anokwanisa kuona zvakadaro, kana kufunga, kana kutonhora kunogona kufungidzirwa nechokwadi nekuona mamiriro echitarisiko chemuviri wemunhu kuva nazvo. Dzimwe tsaona dzinogona kuve dzinofanofungidzirwa kana zvinangwa zvadzo zvave mukutenderera. Izvi zvinokonzeresa zvinogara zvisingafungiki mundangariro kana zviito zvevanhu, uye kana chikonzero chikazopihwa mhedzisiro inotevera. Kuenzanisira: kana dombo rakandwa mumhepo mumwe anogona kufanotaura nezvekudonha kwaro nguva refu risati rabata pasi. Zvinoenderana nesimba iro rakakandirwa pasi pamwe neiyo arc yekukwira kwayo, iyo nzvimbo yekubvondoka kwayo uye nebanga rawaizodonha zvinogona kufanozivikanwa.
Masangano anoshanda mundege yeAralral anogona kuona zvinokonzeresa mushure mekunge agadzirwa uye anogona kufanofungidzira chiitiko nekurongeka nekuti ivo vanogona kuona mune astral icho chichaitika munyama. Asi mhondi inogona kuona kukwirira kweiyo dombo ndokufungidzira nezvekubva kwayo chaizvo senge musande kana muzivi. Izvi zvezvinhu zvekunyama. Zano rakapihwa pamusoro penzira yekuzvidzivirira mutsaona hauratidze kuti rinopihwa nemweya usingafi. Anoda villain angapa imwe yetsaona inguva iri pachena sage. Ese angapa zano munhu akamira munzira yeibwe rekutsika uye kudzivirira kukuvara kwake. Saka dai paine mwedzi. Izvo zvinogona kubvunzwa kuti zano rakadai rinogona kupihwa ne-spook, kana spook isina pfungwa. Isu taizoti chipoko chisina mweya mupfungwa nenzira imwe chete iyoyo murume asina tariro anopenga asina pfungwa. Kunyangwe akarasikirwa nezivo yekuzivikanwa kwake, pane fungidziro shoma inoiswa pane chishuwo, uye inoramba iine chishuwo. Uku kuratidzwa uku kunopa kuenderana kwepfungwa mune dzimwe nguva, asi zvinofanirwa kurangarirwa kuti kunyangwe gorofu rakarasikirwa nepfungwa yekuti mhuka inosara. Iyo mhuka haina kurasikirwa nehungwaru hwayo uye hunyengeri hwemhuka ine fungidziro yakasiyiwa nepfungwa inoigonesa kutevera, pasi pezvimwe zviitiko, senge izvo zvakatogadzirwa kare, zviitiko zvichipfuura munzvimbo mudenga painoshanda. Izvo zvokwadi zvinobva zvaratidzwa pachezvazvo semufananidzo unogona kuratidzwa negirazi. Kana chiitiko chikaonekwa pamusoro pemutumbi wekuda uye mufananidzo uyu wakabatana kana wakabatana neumwe wevakagara pakasarudzika, chipikiri kana iganda rinopindura kumufananidzo wekufunga unoratidzwa pariri uye kuyedza kuburitsa pfungwa kana fungidziro sepiyano. raidaidzira kana kupindura munhu aishandisa makiyi aro. Kana munhu anogara pachigaro achinge arasikirwa kana kuisa chimwe chinhu zvisiri izvo, kurasikirwa uku kunoramba kuri semufananidzo mupfungwa dzake uye mufananidzo uyu unochengetwa seyekare ndangariro. Mufananidzo unowanzonzwisiswa kana kuratidzwa nemutumbi wechido kana spook. Iro rinopindura kumufananidzo nekuudza iye satter kuti panguva yakadai yakarasika chinhu chakadai choukoshi, kana kuti chinyorwa ichi chingawanikwe naye, munzvimbo yaakariisa, kana kwaakange arasika. Izvi zviitiko apo izvo zvirevo zvinotaurwa uye zano rakapihwa, iro rinoratidza kuve rakarurama. Kune rimwe divi, uko chokwadi chimwe chinopihwa, zana remanyepo rinotaurwa, uye kupi zano rikave rakarurama, rinokwana chiuru kurasika kana kukuvadza. Isu saka tinoti iko kutambisa nguva uye zvinokuvadza kubvunza nekutevera zano revakaenda. Ichokwadi chinozivikanwa chokwadi chekuti vanhu vese vanopamba pausina simba hwevamwe, vanoita zvekubheja, kana kubhejera, kana fungidziro pamusika, vanobvumira vavanotarisana navo kuhwina mari shoma, kana ivo vachabata kumeso munhu ane njere. mukufungidzira. Izvi zvinoitirwa kukurudzira akabatwa kuti aenderere mberi njodzi yake, asi pakupedzisira izvi zvinoguma mukutadza kwake kwakazara uye kukuvara. Zvimwe chete ndizvo zvakaita masvikiro uye spook chasers uye phenomena vavhimi. Chokwadi chidiki icho chavanowana chechokwadi chinovanyengerera kuti vaenderere mberi nemaitiro avo kudzamara, semufungisisi, vakadzika kwazvo kuti vabude. Iwo maappooks anofungidzira kudzora uye anogona kupedzisira atarisa munhu wacho zvizere obva atevera kukundikana nekuparadza. Huwandu hwemasvikiro uye hwe phenomena chasers hunoratidza kuti zvataurwa izvi ichokwadi.